Mandefa torrent blueline
Wednesday, January 30, 2013 | Add a comment
Anisan’ny resaka miverimberina matetika ao amin’ny forum blueline ny hoe manakana ny fanaovana torrent ny blueline satria amin’ny alina be vao mba misokatra ny torrent. Ny valiny averin-dry zareo ao amin’ny blueline dia hoe tsy manakana ny torrent ry zareo. Marina ny azy. Efa fotoana elaela ihany nanazavako ny fandehan’io sakana io, izay raha averina tsotsotra dia hoe tsy ny blueline no manakana ny torrent fa ny tracker. Tsy tian’ny tracker hoe adresse IP iray kanefa manao requête maro loatra ao aminy, fa dia kilasiany ho mpisompatra avy hatrany io adiresy IP io, ary bahanany tsy mahazo mampiasa azy mandritra ny fotoana voafetra. Ny tracker anefa ilaina mba hahafahan’ilay rindrankajy torrent mahafantatra hoe aiza sy aiza no misy mpampinono azo hotsentsafina.
Ny olana iray miseho amin’ny torrent ihany koa dia hoe tsy mety mandeha ny port forwarding. Mba hampisosa kokoa ny fandehan’ny fampiasana torrent, dia mila port anankiray misokatra eo amin’ny machine-nao mba ahafahan’ny tracker sy ny mpinono hafa mahalala hoe atsy misy mpampinono anankiray. Ny port dia toy ny varavarana azo dondomina, ka rehefa ilaina ianao dia dondomina, dia mampandroso. Noho ilay adiresy IP itambarana anefa, dia tsy afaka anokafana port mankamin’ny solosainan’ny mpanjifa ilay adiresy IP any amin’ny mpaninjara fifandraisana. Ny hevi-diso amin’ny mpanjifa dia ny mieritreritra fa hoe ny sortie an’ilay box 4G iny dia tonga dia mifandray amin’ny internet. TSIA. Mifandray amin’i Blueline iny, ary Blueline avy eo no mampifandray azy amin’ny internet, izany hoe ny port azonao sokafana dia eo anelanelanao sy Blueline, nefa ny port afaka dondomin’ny mpampiasa torrent any amin’ny internet dia ilay any amin’ilay adiresy IP, eo anivon’i Blueline. Mbola misy làlana anankiray ao elanelam-panahy tsy mampety ny fifandraisana miverina. Ny fifandraisana mandroso ihany no mety, izany hoe ianao mandondona varavarana any amin’ny internet, dia ampandrosoiny dia tontosa ny fifandraisana, fa ny fiifandraisana miverina dia tsy mety mihitsy (izy no handondona anao).
Ny sasany amin’ny tracker, rehefa hitany fa tsy manokatra port ianao, dia toy ny mpinono tsy mety hononoina no dikan’izay, koa tsy isan’izay mpanjija ankafizina. Dia mety mahatonga an’ilay blocage ihany koa io.
Raha ny hevitro manokana dia tsy tsara anaovana torrent mihitsy ny connexion sans fil. Ny antony dia satria amin’ny maha-takalom-patsa vidim-pihinanana an’ilay torrent (tsy tokony ho mpinono foana ianao fa mba mampinono koa indraindray), dia raha maka 1Go amin’ny internet ianao amin’ny torrent dia tokony mba mampinono 1Go ihany koa, raha ny lojika, izany hoe mandefa données 1Go avy ao amin’ny solosainanao mankany amin’ny internet. Amin’ny fandefasana données anefa dia ny box 4G no émetteur, koa heveriko fa tsy dia tsara loatra amin’ilay connexion sans fil raha dia maro loatra no émetteur mandefa données ngezangeza ihany amin’ny fotoana mitovy. Tsara mba ho any amin’ireny connexion misy fil ireny no tena hampiasàna torrent. Hevitro manokana izay.
Monday, January 28, 2013 | 2 comments comments
Zavatra tsy dia mba haiko ny mikolokolo ny fananako izany. Tsy tia fahadiovana loatra aho sady tsy tia mampirina, ary tsy dia mora miraiki-pitia amin’ny ataon’ny vahiny hoe “biens matériels”. Ny ahy rehefa afaka manao izay ilako azy dia basy. Fiteniko matetika ny hoe ny fananana dia andevo natao hanompo fa tsy hotompoina, hanarabiako an’irony olona mandany tapakandro manadio ny fiarany kanefa vao handingana iray metatra ao ivelan’ny vavahady dia ho feno loto. Ny zavatra anefa rehefa mba voakarakara izay indraindray miverina jajika.
Mba nandehandeha tany amin’ny Supreme Center tao Behoririka aho tamin’ny zoma niaraka tamin’ny vadiko nitady zavatra ho azy, dia mba nanararaotra kely nanatsara an’ilay finday Tecno T3. Izaho mpanao am-paosy finday (mahakely filahiana hono! Tsy mbola nitaraina rafotsy hatreto), ka na dia vao volana roa aza no nananako an’ilay finday dia efa vizana sahady, misy kiaka eo amin’ny écran ka manjavozavo hatrany izay ao ambanin’ilay kiaka. Efa nieritreritra ny hanala an’ilay film de protection iny aho saingy tsy mbola sahy, satria fantatro fa andro vitsy ihany koa no ho nisaina dia ho kiaka aminizay ilay tena écran ao ambanin’iny.
Soa ihany tsy nesorina. Rehefa nijerijery teny dia nahita protège écran, film plastique kely. 10.000 Ar miaraka amin’ny mametaka azy. Esoriny ilay film kiaka sy vasoka teo aloha dia hetezany mifanaraka amin’ny haben’ny écran ilay film ary apetaka asolo ilay teo aloha. Misy fanadiovana maharitraritra ihany koa ataony eo anelanelan’ilay film vaovao sy ny tena écran fa nony vita dia tena afa-po tanteraka aho, niverina toy ilay vaovao nividianana azy ilay finday. Ary na dia mbola azo havaozina koa aza izany izay fanadiovana izay, dia mba nividy housse de protection amin’izay koa aho.
Dia mila mividy finday fozafoza asolo an’ilay foza double pince iray iny koa aho ato ho ato. Angamba mba efa amorti nedala iny. Ny olany izao dia ny vatoaratra tsy mitana intsony mihitsy, dia faharoa tsy mandeha intsony ny ôparlera firesahana fa tsy maintsy atao main libre rehefa miresaka amin’olona. Hanahirana ihany raha sendra miantso eo i kdaomba hanao je t’aime je t’aime kanefa ny vadiko ohatra eo akaikiko eo.